Mirado, efa tsy tokan-tena intsony…
Nindrana ny hiran'i Ludger Andrianjaka, fony izy mbola 7 taona tany ho any, no nahitana sy nahafantarana ny talentan'i Mirado Ravohitrarivo voalohany. Folo taona taty aoriana, tamin'ny taona 2007, dia niakatra sehatra irery izy, tetsy amin'ny CC ESCA Antanimena. Babo taminy avy hatrany ny tanora, izay nankafy ny hira natolony. Isan'ny nanintona teny aminy rahateo ny hatsaran'ny endriny, izay nampientam-po tovovavy maro mihitsy…
Namoaka raki-kira roa
Ny taona 2007 ihany i Mirado dia efa namoaka ny raki-kirany voalohany, izay nahitana hira 10 tao anatiny. Nisongadina avokoa ireo hirany ireo, raha tsy hitanisa afa-tsy "Tena tiako ianao", "Ilay hatsaranao" sy ny "Satriko foana", niarahany nihira tamin'i Colombes izay nivoaka tao amin'ilay fifaninanan-kira Pazzapa. Namokatra raki-tsary ho an'ireo hirany sasantsasany, tao anatin'ity raki-kira voalohany ity izy, ny taona 2008, toa an'i "Ho avy tsy ela", "Trano bongo"... Nivoaka kosa ny raki-kirany faharoa tamin’ny taona 2009, izay nahitana hira 10. Taorian'izay dia nangingina i Mirado teo amin'ny sehatry ny mozika. Nanohy ny fianarana mahakasika ny fanamoriana fiara-manidina izy nandritra izany fotoana izany. Nandray an-tanana ihany koa ny raharaham-pianakaviana, araka ny fifampiresahana nataon'ny Jejoo taminy sy efa nozaraina teto ihany.
Tsy nanary ny mozika anefa i Mirado, na dia teo aza izany, fa talenta ao anatiny no sady ankafiziny ihany koa izany. Hiverina hiaka-tsehatra indray izy, ka ny 4 febroary ho avy izao no hifampizara sehatra amin'i Tovo J'Hay. Nanamarihany ny fiverenany ny famokarana raki-tsary miisa roa, hatramin'ny voalohan'ity taona ity. Vao telo andro izao no nozarainy tao anaty tambazotra Facebook ny rohy ahafahana mijery ny raki-tsarin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe : "Ny alokao", mba hiarahan'ireo mpankafy mihira aminy sahady amin'io seho io. Hanomboka amin'ny 3 ora tolakandro ity seho handraisan’i Mirado anjara ity, izay hotanterahina etsy amin'ny Lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina.
Raha mbola betsaka ny nametra-panontaniana ny amin'ny fiainam-pitiavan'i Mirado dia efa tsy tokan-tena intsony ny tovolahy amin'izao fotoana.